Kusarudza iyo Chairo Wiricheya Inowanikwa Mota Brand - Van
hwiricheya kufambidzana mota, dzinozivikanwawo sewaVs, dzinowanzo kuve chidimbu chakakosha chemidziyo mukuchengeta hwiricheya vashandisi vanofamba-famba nguva zhinji sezvinobvira. Pasina aya mhando dzemota, iri danho rakaomarara kuenda kumatunhu akareba, kunyanya mumotokari.
Mawiricheya inoda huwandu hwenzvimbo uye kwete dzese mota dzinogona kuve nehukuru hwadzo saizi, uye nekudaro yakajairwa hwiricheya vashandisi vanosara vasina chero sarudzo.
tsika hwiricheya Vans
Kunyange zvakadaro, pasina kubatsirwa kweWAV; a hwiricheya kufambidzana mota ndiyo chaiyo mota yakagadziriswa uye yakashandurwa chaizvo kutakura hwiricheya vashandisi pamwe nezvigaro zvavo nenzira isina shungu.
Izvo zvinogadzirwa kuti zvive nyore nyore kupinda mukati nekubuda mairi, pamwe nekupa munhu rwendo rwakagadzikana nemaonero akanaka enharaunda. Muchiitiko chekuti iyo hwiricheya mushandisi anoda zvimwe zvekufambisa kugona maturusi, akati wandei emaWAVs akashandurwa achichengeta izvi mupfungwa.
Kune akawanda maVV vatengesi, ndeupi akakukodzera? Quality ndiyo inonyanya kukosha. Iye mutengesi ari kungochinja mota zhinji sezvazvinogona kungoita mari, kana pamwe vanokoshesa zvechokwadi iyo Quality yeWAV yavanogadzira, uye vongoitisa shanduko dzinonyatsoita?
Chinhu chakanakisa kana iwe uchitsvaga nyowani hwiricheya kufambidzana mota inofanirwa kunge iri yekufunga nezve sarudzo yemabasa uye maficha ayo aya marudzi evagadziri anokupa iwe mumaWAVs avo: ko mota nemavans zvine izvo chaizvo zvauchazoda?
Vakatendeuka nenzira yakadai iyo iyo hwiricheya zvinoshandiswa nevashandisi zvichawanikwa zvingatopfuura? Mukudaro, ivo vanowanzove akakodzera WAV inoshandura kuzadzisa zvaunoda.
hwiricheya kufambidzana Motokari
Kusarudza iyo chaiyo WAV inoshandura kwakakosha nekuti inoita kuti iwe uwane hwiricheya kufambidzana mota inozopa zvaunoda. Chinhu chekupedzisira chaunoda imota yakashandurwa zvakanyanya uye isingabatsire iyo hwiricheya mushandisi zvakanaka.
Unofanirwa kunge uine mukana wekuvimba nemotokari yako ichangotengwa, uye nekuziva kuti ichazadzisa zvinodiwa nechero mamiriro ezvinhu anogona kuitika nekuve ne hwiricheya mushandisi semunhu anofamba.
Nokusarudza WAV inoshandura ine zita rakanaka rekugadzira yakanakisa mota, uye ine yakawanda yevatengi vakagutsikana, unogona kunzwa uine chokwadi chekuti unenge uri kuita sarudzo yakanaka kana wawana yako hwiricheya kufambidzana mota.
hwiricheya kufambidzana Mota ine Zvakakodzera Zvimiro
Imwe pfungwa yekupedzisira inofanira kunge iri iyo nzira iyo hwiricheya kufambidzana Mota inotyaira chaizvo. Zviri nyore kupfuudza-kubatanidzwa nezvose zviri nyore zvekuwana Benefits, zvakadaro yeuka kuti mota inoda kutyairwa! Bvunza iyo chaiyo mibvunzo: ko mota ine simba rekutungamira here?
Ichasanganisira yekuchengetedza mota alarm kana immobilizer yakaiswa? Izvi zvechokwadi zvese zvinonetsa; Naizvozvo, iwe unofanirwa kuona kuti une hwese hwakatarisirwa usati watenga nyowani hwiricheya kufambidzana Mota.